Magalada Kismaayo ee Gobolka Jubbalada Hoose waxaa Maanta gaaray saraakiil uu hoggaaminayo taliyaha Ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya Ticabu Yilma, kaas oo u dhashay dalka Itoobiya.
Saraakiishaan ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha Kismaayo kusoo dhaweeyay Saraakiil ka tirsan Ciidamada AMISOM iyo mas’uuliyiin kale,waxana ay haatan kulan la leeyihiin Madaxweynaha Jubbaland.
Kulanka oo ay Saxaafadda dibad-joog ka tahay ayaa wararka la helayo waxaa ay sheegayaan inay uga hadlayaan sidii loo sugi lahaa Amniga Magalada Kismaayo inta lagu guda jiro Arrimaha doorashada Jubbaland.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in saraakiishaan ay sidoo kale kulamo la qaadan doonaan xubnaha Guddiga doorashada iyo sidoo kale musharixiinta,isla markaana ay kormeeri doonaan qeybo badan oo ka mid ah Magalada kismaayo.
Magalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ayaa la filayaa in dhawaan lagu qabto doorashada Madaxweynaha Jubbaland,waxaana Magalada Kismaayo saacadihii la soo dhaafay tegayay wufuud kala duwan, iyada oo shalay uu tegay wafdi ka socda urur goboleedka IGAD oo uu hogaaminayo wakiilka IGAD ee Soomaaliya Dr.Maxamed Guyow.